नेपाल टेलिकमको नाफा ५ अर्ब ८८ करोडभन्दा बढी - Aathikbazarnews.com नेपाल टेलिकमको नाफा ५ अर्ब ८८ करोडभन्दा बढी -
creative writing othello do someone's homework for money homework help apps custom essay services creative writing activities year5creative writing aboutaforest fire creative writing about death primary homework help evacuees ww2 university of iowa creative writing online finance essay writing service college application essay writers for hire difficulties in creative writing to do my homework homework help 4-6 go do your homework gif creative writing on winter season for grade 1 help to write an essay online nyu creative writing continuing education wake forest university creative writing maestro creative writing learning street creative writing how to do my homework in sims4science homework help for 7th graders creative writing graveyard is creative writing an electiveabusiness plan is the written document that details the proposed venture essay on how to help others medical manuscript writing service world war 1 primary homework help custom writing sign in
चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्म नेपाल टेलिकमले रू. ५ अर्ब ८८ करोड ४४ लाख ७२ हजार खुद नाफा गरेको छ । गत वर्षभन्दा यस वर्ष कम्पनीको नाफामा २२ प्रतिशतले कमि आएको हो । गत वर्ष यस अवधिसम्म कम्पनीले रू. ७ अर्ब ५६ करोड ५५ लाख १५ हजार खुद नाफा गरेको थियो ।
गत वर्ष रू. ३२ अर्ब २७ करोड २३ लाखभन्दा बढी कुल आम्दानी गरेको कम्पनीले यस वर्ष रू. ३१ अर्ब ६७ करोड ३७ लाख ७४ हजार मात्र यो आम्दानी गरेको छ । कम्पनीको चुक्तापूँजी रू. १५ अर्ब रहेको छ भने जगेडा कोष रकम रू. ८२ अर्ब ९६ करोड ४९ लाख १४ हजार रहेको छ ।